Wutyee Food House ပုံရိပ်များ | Wutyee Food House
on April 3, 2012 at 5:29 pm | Reply ma naing naing
First of all, I really enjoy reading your blog so much. Oh my..You are so talented!
I’d like to buy your “Wutyee Food House Magazine”. I live in Australia and do you do delivery to Au? I prefer to ownahardcopy even though your blog looks amazing. I am dying to get your magazine & please help!
Thanks, ma naing naing
on April 4, 2012 at 5:45 am | Reply chowutyee
Ma Naing Naing… အားပေးလို့ ၀တ်ရည် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. 😀 Wutyee Food House Magazine ဟုတ်ဖူး၊ Food Magazine ပါ။ heee 😀
Food Magazine က ၀တ်၇ည်ကိုယ်တိုင် ထုတ်တာမဟုတ်တော့၊ ၀တ်ရည် နိုင်ငံခြားကို ပို့ပေးနိုင်၊ မပို့ပေးနိုင်ကို စာအုပ်တိုက်ကို မေးကြည့်ပေးပါ့မယ်။ အကယ်၍ စာအုပ်တိုက်က ပိုို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ချက်ချင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါ့မယ်နော်.. ကျေးဇူးအထူးတင်လျှက်ပါ.. 😀
on April 3, 2012 at 9:15 pm | Reply Angeline Jensen
My dear Wutyee,
I would like to have your ” Wutyee Food House Magazine”. I live in Denmark, could you please send to Denmark, or can I order from Singapore?
Hope to hearing from you soon, I love all your recipe,
on April 4, 2012 at 5:49 am | Reply chowutyee
Ma Angeline Jensen, မရေ အားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ အ၇မ်းကျေးဇူးပါ။ ဒါပေမယ့် Wutyee Food House Magazine မဟုတ်ဘူး၊ Food Magazine ပါ။ Food Magazine မှာ ၀တ်ရည် ဟင်းချက်နည်း ၁၁မျိုးကနေ ၁၄မျိုးထိ လစဉ်ထည့်တာပါ။ အဲဒီ မဂဇင်းမှာ ၀တ်ရည်ဟင်းချက်နည်းအပြင် အခြားဟင်းချက်နည်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀တ်ရည်ကိုယ်တိုင် ထုတ်တာ မဟုတ်တော့ စာအုပ်တိုက်ကို နိုင်ငံခြားကို ပို့ပေးနိုင်၊ မပို့ပေးနိုင် တချက်လောက် ပြန်မေးပေးပါ့မယ်နော်… ပို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ၀တ်ရည် ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပေးပါ့မယ် မရေ.. 😀
on April 19, 2012 at 2:06 pm | Reply chowutyee
Ma Angeline စာအုပ်တိုက်ကို မေးပြီပြီ သူတို့ Food Magazine စာအုပ်တွေကို နိုင်ငံခြားလည်း ပို့ပေးတယ်တဲ့။ ဒါက foodmagazine.mm@gmail.com Food Magazine အီးမေးပါ။ အသေးစိတ်ကို သူတို့ကို မေးလိုက်ပါနော်..
on April 15, 2012 at 3:21 am | Reply ma naing naing
Thanks for the reply, Wutyee. Please let me know :0)
on April 19, 2012 at 2:05 pm | Reply chowutyee
မနိုင်နိုင်၊ စာအုပ်တိုက်ကို မေးပြီပြီ သူတို့ Food Magazine စာအုပ်တွေကို နိုင်ငံခြားလည်း ပို့ပေးတယ်တဲ့။ ဒါက foodmagazine.mm@gmail.com Food Magazine အီးမေးပါ။ အသေးစိတ်ကို သူတို့ကို မေးလိုက်ပါနော်.. 🙂
on May 1, 2012 at 4:28 am | Reply Than Hlaing
ညီမဘလော့ကိုဖတ်ပြီးချက်ချင်စိတ်ရောစားချင်စိတ်ရောပေါ်ပြီ သွား၇ည်တောင်ကျလာတယ်ဗျ. ကြောင်ရှာပွင့်သုတ်နည်းလေးများရှိယင်တင်ပေးပါဦးကျေးဖူးတင်ပါတယ်
on May 2, 2012 at 11:34 am | Reply chowutyee
I will post it later bro.. Thanks
on May 9, 2012 at 12:27 am | Reply yelin
HI, i just want to know how where should i get about your book.
on May 10, 2012 at 2:59 am | Reply chowutyee
စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းမှာလည်း ၀ယ်လို့ရတယ်။ ပြီတော့ Capital Market မှာလည်း ရောင်းပါတယ်… အားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်
Wutyee Food House Magazine ပုံရိပ်များ
၀တ်ရည် နောက်ဆုံး ရေးထား ၀တ္တု
Wutyee Food House Facebook Fan
-မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ (37)
ဟင်းအသစ်တင်တိုင်း သိနိုင်ရန် Email Subscription လုပ်ပါ
ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ)
Archives Select Month May 2012 (8) April 2012 (9) March 2012 (5) February 2012 (11) January 2012 (4) December 2011 (13) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (3) June 2011 (2) May 2011 (2) April 2011 (4) March 2011 (2) February 2011 (1) January 2011 (4) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (5) September 2010 (6) August 2010 (7) July 2010 (5) June 2010 (7) May 2010 (7) April 2010 (11) March 2010 (14) February 2010 (7) January 2010 (12) December 2009 (10)
U Myo Aung on ကြက်သားချိုချဉ်ကြော်
မုန့်ဟင်းခါး နဲ့ သူင… on ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ)
全身脱毛　沖縄　脱毛サロン on ကြက်ခြေထောက် တုံယမ်းဟင်းချို
手汗 制汗剤 on ၀က်သား ပေါက်စီ အိအိလေး
マカ効果 on ကြက်ခြေထောက် တုံယမ်းဟင်းချို
ရန်ကုန်သူ on ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ)